Famandrihana hotely an-tserasera amin'ny vidiny tsara indrindra, aza mandoa vola bebe kokoa amin'ny fialantsasatrao
Ampiasao ny motera fikarohana hamandriho ny trano fandraisam-bahininao
Mieritreritra ny hanao dia lavitra ve ianao ary tsy hahafantatra hoe aiza no hanombohana? Eny, araka ny filazan'ny tantara mahafinaritra dia hataontsika hatramin'ny voalohany. Ny iray amin'ireo olana voalohany ananantsika dia trano fandraisam-bahiny boky. Tsy misy isalasalana fa maniry foana isika mitadiava hotely mora vidy izay misy fepetra tonga lafatra ka tsy hadino ny fijanonantsika. Manampy anao amin'izany izahay!
Tsindrio eto raha hamandrika amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Internet
Ahoana ny fomba hahitana hotely mora vidy amin'ny Internet
Rehefa mitady trano fandraisam-bahiny tsara ho an'ny fialantsasatra manaraka, dia tsy mila mandany ora maro intsony isika amin'ny fijerena ny ilany na ny ankilany. Azonao atao izao ny mampifantoka ny ezaka rehetra ataonao amin'ny asa mahafinaritra hafa.
Raha tsy manana trano fandraisam-bahiny manokana ianao dia avelao ny tenanay hitari-dalana anay motera fikarohana hotely. Amin'ity tranga ity, io no ho fomba haingana sy haingana indrindra anananao hahazoana ny fampahalalana rehetra amin'ny tsindry iray monja.
Safidy iray hafa hahitana ny trano fandraisam-bahiny tsara indrindra Ao amin'ireo masoivoho amin'ny alàlan'ny Internet izany. Mazava ho azy, indray, tsy maintsy mieritreritra ianao fa isaky ny misy mpanelanelana amin'ity karazana ity dia hiakatra ny vidiny.
Azonao atao mankanesa ao amin'ny pejin'ny hotely Mazava ho azy, indraindray, tsy manome anao ny tombony sy ny vidiny hitantsika rehetra foana izy ireo.
Dingana fototra hitadiavana hotely mora vidy amin'ny Internet
Mpifanaraka: Alohan'ny manaova famandrihana, Tsara foana ny mandinika kely ny toerana handehanantsika fialan-tsasatra. Mitadiava fampahalalana raha toa ka misy karazana hetsika ao amin'io faritra voafidy io. Izany dia satria raha izany dia lasa lafo kokoa ny vidiny.
Tanàna akaiky: Raha hitanao izany amin'ny farany datin'ny fialantsasatrao, any amin'ny fety ny tanjona satria tsy maintsy mitady vahaolana hafa. Ny hevitra tsara indrindra dia ny mifidy ireo tanàna manodidina. Amin'izany fomba izany dia ho akaiky sy handany kely amin'ny trano fandraisam-bahiny izahay.
mialoha: Tsy misy fisalasalana, rehefa efa fantatsika sy mazava ny toerana halehantsika, dia tsara kokoa ny manao famandrihana tsy ho ela. Ny fandrosoana dia afaka mamonjy antsika amin'ny fahazoana miala ny efitrano nofinofis. Hamarino raha fifampiraharahana amin'ny hotely rehetra na miaraka amin'ny sakafo maraina fotsiny. Noho io dia afaka misafidy mifototra amin'ny filantsika isika izao.
Trano fandraisam-bahiny na fisotroan-dronono: Efa fantatsika fa afaka manao rehetra isika nofinofy hotely mahafinaritra, saingy azo antoka fa ho an'ny ankamaroantsika dia tsy afa-manoatra. Noho izany, tonga ny fotoana hametrahana ny tongotrao amin'ny tany ary hitady fomba hafa. Raha handany ny tontolo andro ianao amin'ny toerana iray, dia tsara kokoa ny misafidy ny tolotra hotely. Ny tsara indrindra dia ao amin'ireo antsoina hoe trano fandraisam-bahiny na fisotroan-dronono. Toerana tonga lafatra hanasana sy hiala sasatra mandritra ny ora maro.
Malalaka ny ankizy: Raha mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao, dia mendrika ny mitady ireo safidy mamela antsika hihena ny vidiny. Arakaraka ny taona, misy maro hotely lafo vidy Tsy hanome vola anao izy ireo matory ao amin'ny efitrano iray. Mila mijery fotsiny ny politikam-pahafahan'izy ireo ianao.
Ahoana ny famandrihana ny trano fandraisam-bahiny amin'ny Internet?
Androany dia tsara vintana isika manana internet. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra hanamora ny fiainana ho antsika. Rehefa mandehandeha dia hitantsika koa ny lanitra misokatra ao. Tianao mamandriha hotely amin'ny Internet? Eny, izany no tsotra indrindra.
Raha efa nijery ianao ary efa manana ny trano fandraisam-bahiny ilainao amin'ny fialan-tsasatrao, dia ny dingana manaraka dia ny fanaovana ny famandrihana. Mba tsy hiviliana be dia be dia nifidy motera fikarohana hotely izahay (kitiho eto raha hiditra sy hamandrika amin'ny vidiny tsara indrindra). Izy no hanao ny asa rehetra ho antsika. Mila miditra ny toerana alehantsika fotsiny isika dia izay. Raha nisafidy an'io ianao dia hahita olona marobe safidy hotely. Anisan'ireny ianao dia afaka mahita ny toetrany rehetra. Avy amin'ny toerana mankany amin'ny sary maranitra hahazoana hevitra. Rehefa manapa-kevitra ianao dia tsy maintsy misafidy izay maharesy lahatra anao indrindra. Amin'ny fipihana ity safidy ity dia hahazo pejy vaovao ianao hahafahanao safidio ny efitrano. Ao no ahafahanao manamarina izay maimaim-poana ary koa amin'ny andro misy. Azonao atao ny misafidy an'ity fampahalalana ity amin'ny fomba tena tsotra sy avy amin'ny sezalanao. Rehefa voasaronao ny zava-drehetra dia mila tsindrio fotsiny ny fanekena dia hahomby ny famandrihana.
Hevitra amin'ny hotely an-tserasera
Ny iray amin'ireo tanjaka hafa rehefa manao famandrihana hotely dia ny famakiana kely ny hevitra avelan'ny mpanjifa. Mazava ho azy, tsy izy ireo foana no mahomby indrindra ary izany dia, amin'ny tsiro tsy misy manery. Mbola afaka mahazo hevitra momba ireo zavatra mahazatra indrindra amin'ny toerana nofidinao ianao. Raha ny fitsipika ankapobeny dia matetika no resahina ny zavatra toy ny fahadiovana sy ny tabataba. rOA hevi-dehibe raha mifantina toerana iray na toerana hafa.
Etsy ankilany, zava-dehibe ihany koa ny fananan'izy ireo a Fandraisana 24 ora. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria tsy fantatsika hoe rahoviana no ho tonga isika ary rehefa tonga eo amin'ilay toerana isika, dia azo antoka fa ho be ny fotoana any ivelany noho ny ao anatiny. Toy izany koa, ilaina ny manontany momba ireo fotodrafitrasa sy ny fampiasana tsara ananan'izy ireo. Ho hitantsika koa izany ho tomban'ezaka ao amin'ny pejy fanehoan-kevitra. Indraindray dia tsara kokoa ny mandany fotoana kely hamakiana, satria ho hitanao ny fomba hanombohana ny fampahalalana. Ity dia fomba tsara indrindra ahafantarana ny toerana, alohan'ny hahatongavany any.